Barcelona oo heshiiska Matthijs de Ligt ka qeyb dhigaysa laba laacib | Radio Himilo
Home / Cayaaro / Barcelona oo heshiiska Matthijs de Ligt ka qeyb dhigaysa laba laacib
Barcelona oo heshiiska Matthijs de Ligt ka qeyb dhigaysa laba laacib
Posted by: Ahmed Haaddi June 14, 2021
Himilo – Barcelona waxay diyaar u tahay inay ku darto Antoine Griezmann ama Ousmane Dembele si ay qeyb uga noqdaan heshiiska daafaca Juventus Matthijs de Ligt.
Juve ayaa ku guuleysatay loolanka loogu jiro saxiixa De Ligt ee Ajax sannadkii 2019, in kasta oo xiddiga heerka caalami ee dalka Netherlands weli loo maleynayo inuu yahay bartilmaameedka koowaad ee Barcelona ee daaqadda soo socota.
Lacagta cakiran ee Catalans ayaa wajaheysa deyn gaareysa €1bn (£ 859m) waxayna mudnaanta siinayaan saxiixyada wakiilada xorta ah sida Eric Garcia, laakiin madaxweyne Joan Laporta ayaa u maleynaya inuu doonayo inuu heshiis la galo De Ligt.
Sida laga soo xigtay Le 10 Sport, Barca ayaa isha ku heysa inay aragto De Ligt oo xiriir la leh saaxiibkiisii ​​hore ee Ajax isla markaana ay isku wadan yihiin Frenkie de Jong oo ku sugan Camp Nou, laakiin lacag toos ah oo daafaca ah ayaan macquul aheyn.
Natiijo ahaan, Griezmann ama Dembele – iyadoo Ousmane aanu weli qandaraas cusub u saxiixin – ayaa lagu dari karaa si hoos loogu dhigo qiimaha, laakiin Juve waxay u maleyneysaa inaysan xiiseyneyn wax dalab ah oo De Ligt ah.
De Ligt ayaa xilli ciyaareedkii hore Juventus kasoo muuqday 36 jeer tartamada oo dhan, laakiin dhaawac gumaarka ah ayaa ka hor istaagay inuu ciyaaro kulankii Netherlands ay 3-2 kaga badisay Ukraine intii lagu jiray kulankii furitaanka ee Euro 2020 Axadii.
Previous: 14 June – Maalinta caalamiga ee dhiig-ku-deeqista
Next: Maqal- Suwar min xayaati saxaabah- Casharka 108aad